Isbeddellada Suuq -geynta B2B | Martech Zone
Faafida ayaa si weyn u carqaladeysay isbeddellada suuqgeynta macaamiisha iyadoo ganacsiyadu la qabsadeen tallaabooyinka dowladda ee la qaaday si ay isugu dayaan inay ka hortagaan faafitaanka degdegga ah ee COVID-19. Markii shirarkii la xiray, iibsadayaasha B2B waxay u guureen onleenka si ay u helaan nuxur iyo ilo farsamo si ay uga caawiyaan iyaga marxaladaha safarka iibsadaha B2B.
Kooxda ku jirta Suuq -geynta Dijital ah ee Filibiin ayaa isku dubariday xogtan, Isbeddellada Suuqgeynta Mawduuca B2B ee 2021 taas oo guriga ka dhigaysa 7 isbeddel oo udub dhexaad u ah sida suuq -geynta maadada B2B ay uga jawaabeen warshadaha iyo isbeddellada dabeecadda:
Mawduucu wuxuu noqdaa mid la beegsado - kala -soocidda iyo shaqsiyeynta waxay noqdeen kuwa ugu muhimsan iyadoo suuqyadu raadinayaan inay bixiyaan khibrad la beegsaday. Maareynta maadada oo ay weheliso aaladaha otomaatiga suuqgeynta iyo sirdoonka macmalka ah ayaa bixinaya farsamada lagama maarmaanka u ah soo saarista iyo kor u qaadida khibradahaan la beegsaday.
Mawduucu Wuxuu Noqonayaa Mid Dhex Dhexaad Ah Oo Khibrad Leh - maqal, fiidyow, animation, xisaabiyayaal, dheelitirnaan, xaqiiqo la kordhiyay, iyo xaqiiqda dalwaddu waxay kor u qaadayaan khibradda iibsadaha B2B…
Isticmaalka Macluumaadka Via Mobile First - Kuma filna in la dhiso goob wax -qabad leh oo laga arki karo aaladda moobiilka ka dib marka la dhiso aragtidaada desktop -ka. Shirkado aad u tiro badan ayaa si firfircoon u beddelaya maadada iyo khibradda ay u keenayaan booqdayaasha guurguura.
Suuqgeynta Mawduucyada ee Kanaallo Badan - La kulanka martida halka ay aad u noqonayaan kuwo muhiim ah maadaama iibsadayaasha B2B ay leeyihiin kheyraad aan dhammaad lahayn. Haddii iibsadahaagu ku jiro kanaalka bulshada, dhexgalka iyaga waxaa lagama maarmaan ah. Haddii ay maqal ku jiraan (tusaale. Podcast), bixinta macluumaadka waa lagama maarmaan. Haddii ay ku jiraan fiidyow, waxa ku jira ayaa laga yaabaa inay u baahdaan inay ku jiraan YouTube.
Suuqgeynta Mawduuca Waxaa Xukuma Maamulka Mawduuca Durdurrada aan dhammaadka lahayn ee nuxurka ahi waa kuwo aan waxtar lahayn iyada oo shirkaduhu ay rabaan inay dhisaan a maktabad dhexe, oo dhammaystiran in ay bixiyaan khabiir, awood leh, iyo nuxur la aamini karo kuwa wax iibsan kara markay baarayaan xalalka caqabadaha ganacsi.
Suuqgeynta Mawduucyada Ka -faa'iideysiga Hawlaha Wada -hawlgalayaasha -Ka-faa'iideysiga cilaaqaadka iyo ka-gudbinta waxyaabaha ku jira dhagaystayaasha la beegsanayo ayaa ah hab wax-ku-ool ah oo wax ku ool ah oo lagu wado natiijooyinka ganacsiga.
Suuqgeynta Macluumaadka Sida Adeeg Dibedda ah - In ka badan kala badh dhammaan shirkadaha B2B ayaa dib -u -dejintooda wax -ka -beddelka - shaqaalaysiiya xirfadlayaal leh cilmi -baarista, naqshadeynta, nuqul -qorista, iyo awoodda fulinta oo laga yaabo inay tahay mid aan la awoodi karin gudaha.
Caawinta sumcadaha hyperfocus iyo horumarinta istiraatiijiyadaha suuqgeynta nuxurka ee dhammaan kanaalada iyo dhexdhexaadiyaasha ayaa ah shaqada aan jeclahay macaamiisha. Shirkado aad u tiro badan ayaa leh raad -raac ka kooban waxyaabo aan lahayn istiraatiijiyad dhexe oo lagu wado natiijooyinka ganacsiga dhabta ah. The buufin oo tukada habka kobcinta nuxurka (tusaale. Qoraallada blog -ka toddobaadkii) ma caawinayaan meheraddaada ...
Xor baad ii tahay inaad ila soo xiriirto haddii aad u baahan tahay kaalmo. Waxaan ka caawinnay ganacsiyada yaryar ee B2B ilaa shirkadaha ganacsiga inay horumariyaan xeeladaha suuqgeynta nuxurka si ay u wadaan natiijooyin la qiyaasi karo. Ma aha hab fudud, laakiin waa mid aad u fiican oo midho leh maadaama ganacsigaagu awoodo inuu dhiso isku -dheelitir iyo ujeedo ka dambaysa dhammaan waxyaabaha ay horumariyaan, cusboonaysiiyaan, oo dib u soo celiyaan.
Waa tan xog -ururinta buuxda ee Suuq -geynta Dijital ah ee Filibiin:
Tags: articlesawood lehb2biibsadaha b2bb2b marxaladaha iibsadahanuxurka b2bsuuq geynta b2bb2b isbeddellada suuqgeynta waxyaabahaisbeddellada nuxurka b2bsafarka iibsadayaashawac talaabomaktabaddaContent Suuqcopywritingdallacsiintahelitaanka macaamiishamarkhaatiyada macaamiishadesignkhabiirkhibradinfographicjiilka ledcontent lamaanahabadeecadahaku habbooncilmiwarbaahinta bulshadahogaaminta fikirkakalsooniaaminnimoxaqiiqada dalwaddiiwhitepapers
Soo koobista Belinda
Sep 10, 2013 at 10: 49 PM
Waxaan jeclaan lahaa inaan tan la wadaago saaxiibbadayda G plus. Tani dhab ahaantii way caawin lahayd iyaga. 🙂